मेरो पनि भन्नु छ | UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Sun, Apr 22, 2018 | 15:59:43 NST
शिक्षकको मनोभावना नबुझ्ने, श्रम शोषण हुने, काम गराउन पछि नपर्ने, तलब दिन कञ्जुस्याईं गर्ने यस्तै समस्या त हुन् बोर्डिङ स्कूलका ।
कानुन भन्नु नै चुट्किला जस्तो भइसक्यो त जतिसुकै बनुन् कसलाई के मतलब । फेरि महिला हिंसाका विषय हेर्ने निकायहरु नै दर्शन जस्ता छन् ।
Bikram Gyawali @bikmad
नेपालको कानुन दैवले जानुन । कानुन जतिसुकै कडा बनाएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि कसरी महिलामाथि हुने हिंसाका घटना कम हुन्छ र ?
विभिन्न संघ संस्था तथा संसदमा महिला नपुगेका होइनन् तर त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो कर्तब्य भुलिहाल्छन् अनि कहाँबाट महिला अधिकार पालना हुन्छ ? ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’
महिला मजबुत नभएर पनि हो तर आजकल पुरुष हिंसापनि बढी नै हुनेर गरेको छ त्यसको पनि कुरा गर्ने की ?
नेपालमा जुनसुकै किसिमको अपराध गरेपनि दिने सजायँ भनेको कि जेल हाल्ने हो कि जरिवाना तिराउने हो, यदि अपराधको प्रकृति हेरेर मृत्यदण्ड दिने हो भने महिला हिंसा मात्रै होइन सबै किसिमको अपराध न्युनीकरण हुन्छ
११ बर्षसम्म हतियारको राजनीति गरेर १६ हजारको बलिदान दिएको बिर्सिएजस्तो छ माओवादी । यसअघि नागरिकसँग गरेका बाचा पनि विर्सिए नेताहरुले । एकता गर्नुपर्ने बेलामा यसरी फुटेर हुन्न
याङ भुजेल, धनकुटा
पदको लोलुपता अनि अहंकारी सोच नै नेपाली राजनीतिको मुख्य रुप हो । कसैले पनि अर्काको अस्थीत्व स्वीकार्न नसक्नुको उपज हो यो समस्या ।
आफ्नो मात्रै भुँडी भर्ने र नागरिकको पीर,मर्का नसोच्ने समस्याका कारण यस्तो भएको हो । के थाहा माओवादीमा कसैले नागरिकका पीर, मर्काका कुरा झिकेर पो विवाद भएको हो की ?
महेन्द्र थारु, बर्दिया
माओवादीका नेता सितिमिति मिल्दैनन् । सशस्त्र विद्रोहबाट आएका उनीहरुले वास्तविक धरातलको राजनीति गर्नै जानेका छैनन्
तारा सिग्देल, झापा
अध्यक्षको हाली मुहाली, समय अनुसार नचल्ने हो भने एकीकृत नेकपा माओवादी टुक्रिन धेरै समय लाग्दैन ।
माओवादीलाई हरेक राष्टको तुलना गर्दै त्यस्तै देश बनाउँछौं भनेका थिए माओवादीले । अहिले आफ्नै पार्टी भित्रको विवाद समेत मिलाउन सकेको छैन । के भन्ने र ?
अस्थाई शिक्षकहरुको जायज मागलाई पुरा गर्नुपर्छ । अस्थायी शिक्षकलाई माछो माछो भ्यागुतो गर्नु हुँदैन । सरकार लचिलो हुनै पर्छ ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना बढाउने काम ट्राफिक प्रहरीबाट नैं सुरु गर्नुपर्छ
सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना बढाउने काम त पहिले ट्राफिक प्रहरीबाट नैं सुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । यो तालिमलाई ट्राफिक प्रहरीको माध्यमबाट स्कुल क्याम्पसमा लैजानुपर्छ ।
योगेन्द्र रिजाल, झापा
सडक दुर्घटनामा सडक धेरै सानो र चालकको लापरबाही मुख्य कारण हो ।
लोकेन्द्र रोका मगर, रोल्पा
सडकको बिषयमा कहाँ छ नियम कानूनले बनेको ठाउँ र अनि नियम सिकाउनु /सडक नियम त ट्राफिकलाई नै पहिला सिकाउनु पर्छ ।
नेपाल वायू सेवा निगममा नयाँ जाहज आउनु त खुशीको कुरा हो तर साह्रै खुशी हुनु पनि ब्यर्थ छ । निगममा उनै कर्मचारी छन जस्ले निगमका यस्ता धेरै जाहज खाइसकेका छन अनि तेस्ता कर्मचारी हरु त खुशी होलान दशै नै आयो भनी र्‍याल काड्दै होलान पखेटा खाउँकी खुट्टा (पांग्रा) भनी ।
हामीलाई त निगमले जहाज ल्याउनु कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने जस्तै हो । गोरेटो बाटोकै भर रहेको हाम्रो गाउँमा गाडीको बाटो त पुग्न सकेको छैन अनि जहाज ल्याउनुको हामीलाई के अर्थ । सुन्न पाइए पनि देख्न नपाइने भो । यसको खुशी त राजधानी र प्लेन चढ्न पाउने ठाउँका नागरिकलाई वढी हो ।
खुशी लाग्यो २८ बर्ष पछि जहाज ल्याउने हाम्रो नेपाल कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरो थाहा भो
वर्षहरु वित्दैछन तर लोकतन्त्रको संस्थागत भएको छैन । विकासमा देशले फड्को मार्न सकेको छैन भनेर लेख्नु भएको छ भने यो आठ वर्षमा नेपालीले कल्पना गरेको विकास अनि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति भएन ।
काठमाडौं, वैशाख ९ – ब्यानरमा लेनिनको फोटो नभएकोले लफडा भएपछि रोकिएको एमाले–माओवादीको संयुक्तसभा केही बेरमा सुरु हुँदैछ ।
काबुलमा आत्मघाती बम विस्फोट : कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु
​ओली र प्रचण्ड सभागृहमा पुगे पनि कार्यक्रम सुरु हुन सकेन
चीनमा डुङ्गा पल्टिदा सत्र जनाको ज्यान गयाे
​स्वारेजलाई फापेको बार्सिलोना
​कर्णाली प्रदेश : नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीच भेटघाट
दैलेखमा डिजेल/पेट्रोल अभाव